Ukupheka kanjani iphalenda ingane?
Zonke izingane ekudleni kumele zibe ne-porridge. Ukupheka kanjani iphalenda ingane? Futhi ukuthi ungakhetha kanjani iphalenda lezingane ezifanele, abazithengisa ezitolo?
Izakhi ze-buckwheat ziyizo nobisi okusanhlamvu. Wonke umuntu uyazi ukuthi le mikhiqizo iyasiza kakhulu futhi iyigugu ezindaweni zayo. E-croup ye-carbohydrate amaningi (isitashi), anike amandla amandla, amandla, ama-vithamini B, izitshalo eziprotheyini, insimbi, i-magnesium; Ngaphezu kwalokho, banikeza umzimba ngemifino yezitshalo, okudingeka kakhulu emsebenzini omuhle wepheshana lomzimba. Ubisi luqukethe amaprotheni abalulekile adlula amaprotheni okusanhlamvu, ngaphandle kokucebile amaminerali amaminerali namavithamini, ngakho-ke agcwalisa ngokuphelele ukubunjwa kwe-porridge.
Ngokuvamile, i-buckwheat iyisisindo sesibili somntwana obelethwe ngebele. Kulethwa ekudleni cishe ngesonto emva kuka-2-3, emva kokudla kokuqala sekuhanjisiwe - isobho semifino, futhi lokhu kunendawo ethile ezinyangeni ezinhlanu kuya kweziyisithupha. Uma kungazelelwe ingane inenkinga ngesitokisini, ayizinzile ngokwanele, izuza isisindo noma ivuselele njalo, ngakho udokotela angakutshela ukuthi uqale udoti lokuqala hhayi nge-puree yemifino, kodwa nge-porridge.
Ngomntwana, i-buckwheat ibaluleke kakhulu, ngoba luhlobo olunjalo lwebhuloho phakathi kwesinqe nokudla okuqinile, yingakho udinga ukondla umntwana ngezinto ezincane. Ngosuku lokuqala, kufanele uzame ithisipuni eyodwa, okwesibili - akukho amathisipuni amathathu noma amane kanye neviki elilodwa okufanele ulethwe engxenyeni ka-100-120 amagremu. Lesi sabelo se-porridge kufanele sithathe indawo eyodwa yokubeletha okugcwele. Yondla ingane yakho nge-spoon, kanye ngosuku, futhi engcono kakhulu, uma wenza lokhu ekuseni ekuseni. Ngemuva kwalokhu, ungavumela ukugeza kwe-porridge nge-kefir, ijusi noma ubisi lwebele.
Uma unqume ukupheka i-porridge ngokwakho, udinga ukwazi ukuthi okokuqala udinga ukwenze uketshezi (5%). Kusho ukuthini lokhu? Amagremu amahlanu kafulawa noma okusanhlamvu ngamalitha angu-100 amanzi. Ngemva kwesikhashana, endaweni ethile, amasonto owodwa noma amabili, ungaqala ukupheka i-porridge kakade amaphesenti ayishumi. Ukuze ungakwazi ukuphoqa ikhanda lakho ngokubala inani lamagremu kafulawa ngamanzi athile, kubalulekile ukucacisa ukuthi ukulungiselela amaphuphu amahlanu wamaphesenti kufanele uchithe isipuni sofulawa ngamaphilenti angu-100 ebisi noma amanzi, amaphuzu ayisishiyagalombili amaphuzu - 1.5 amathisipuni ngamalitha angu-100 amanzi, kanye no-10% amathisipuni amabili enani elifanayo lemali. Ungangeza usawoti noshukela, lokhu akuvunyelwe nanoma ubani. Kodwa khumbula ukuthi ngokunambitheka kwakho, i-porridge kumele ichithe noma ifakwe ngaphansi kosawoti. Yiqiniso, udinga ukufaka amafutha emgodini, kepha ama-gramu angu-5 kuphela ekhonzayo, hhayi ngaphezulu.
Izindlela eziningana zokupheka. Uma uthatha isinqumo sokupheka uhla lwamakhokheji kusuka kufulawa we-cereal, okokuqala kufanele kuhlanjululwe emanzini abandayo, ngakho faka ubisi obusayo bese upheka imizuzu engaba mihlanu. Uma usebenzisa okusanhlamvu ukupheka, kunconywa ukuba uqale uyigcobe kahle emanzini, bese uthele ubisi obilisayo bese ubilise uze ulungele. I-porridge ekulungele impela kufanele isuliwe nge-sieve.
Uhlobo luni lokusanhlamvu lokukhetha ingane yakho?
Okuwusizo kakhulu yi-oatmeal kanye ne-porridge ye-buckwheat. Ngoba zingaphezu kwazo zonke ezinye okusanhlamvu zicebile amaprotheni nemifino yemifino, ewusizo ikakhulukazi futhi edingekayo ukuze kusetshenziswe kahle emaphethelweni emathunjini. Ebandleni kanye nelayisi, kukhona isitashi eziningi, okuwusizo emzimbeni ukukhiqiza amandla. Indawo yesithathu ngokwemisebenzi yenziwa yi-mannakrumpa. Kodwa lezi zitshalo azinawo amaminerali amaminerali amaminerali okwanele, ngaphandle kwemboni, inothile ensimbi. Uma ingane ineminyaka engu-6 ubudala, ungaqala ukumnika ezinye izithelo: ibhali, rye, ukolweni - aqukethe gluten, uma, ngempela, ingane ayinakho ukungavumelani kwangempela kule squirrel.
Ngaphezu kwalokho, lapho ukhetha i-croup, qaphela ukuthi irayisi inezinto zokulungisa nokugcizelela; i-buckwheat kanye ne-oatmeal i-fibre ecebile, ngakho-ke ingabangela umphumela we-laxative; ummbila awuthathi hlangothi. Njengoba unikezwe izici zesitshalo ngasinye, udinga ukushintsha futhi uzame ukupheka iphariji elixubekile. Ngokuba umntwana uyoba usizo kakhulu pink porridge, engeza ithanga, isanqante juice, apula noma izaqathe.
Mhlawumbe uzothola kuyimangalisa ukuthi iningi labahlengikazi ngonyaka wokuqala wokuphila imvuthu iluleka ukwehlisa ingane nge-porridges yokukhiqiza ezimbonini. Ama-porridges athengisa kangcono kakhulu futhi asetshenziswe kabusha. Esikhathini ngasinye sigaba sonyaka, bahlaziywa ngamaminerali amaminerali namavithamini ahambisana nawo, ngaphezu kwalokho, aqukethe i-iron ne-calcium. Kuzo, ama-non, ama-additives, amakhemikhali amakhemikhali, ama-preservatives kanye nezimo eziqinisayo. Okunye okuzuzisa ukuthi kungenzeka ukufaka okusanhlamvu okunje njenge-rye, ummbila nebhali ekudleni komntwana, futhi wonke umuntu uyazi ukuthi ekhaya kunzima kakhulu ukugaya.
Iningi lama porridges asetshenziswe ezweni lethu ngokudla komntwana lilethwa phesheya. Ngesizatfu esithile, imikhiqizo yasekhaya ayimelwe kahle kakhulu emakethe, nakuba ukubunjwa kwabo okuwusizo akusilo phansi komgogodla wangaphandle, kodwa kukhona okunye okumele kube khona - kudingeka baphekwe.
Ama-porridges amaningi anamuhla, amelwa izinkampani zakwamanye amazwe, alungiselele ngokushesha, okungukuthi, akudingeki ukuthi aphekwe. Izitshalo ezinjalo zingahlukaniswa zibe yizinhlobo ezimbili-ubisi kanye nobisi. Ukwenza ubisi ubisi kudinga kuphela amanzi. Engeza amafutha, ushukela, usawoti nokunye okuningi ngakho abadingi ubisi. Kuphela uma ngabe ingane ingatholi isisindo noma iswele ukudla, ngakho-ke iseluleko sikadokotela, ungangezela ama-gramu amabili noma amathathu webhotela ngokuphakela kwendlovu ukuze ukwandise amandla okusebenza komkhiqizo futhi uthuthukise ukunambitheka.
Ama-dumplings angenayo i-milk-milk are ready with the addition of milk specialty for baby food. Uma ingane ingabekezeleki ubisi, ungakwazi ukuchitha iphalaji ngamanzi, kodwa landela inothi ukuthi kulokhu inani lokudla okunomsoco lizokwehla.
Inkimbinkimbi yokukhetha uketshezi ukuthi akulungele nje kuphela ngamanzi nobisi, kodwa nangezihlanganisi. Izinkampani eziningi zikhiqiza okusanhlamvu ngezithasiselo zemvelo: ushokoledi, uju, izithelo, amajikijolo, i-caramel, ama-hazelnuts, imifino, ibhanana. I-Mozhnovstrett ngisho nenhlanganisela ethakazelisayo kakhulu, njenge-buckwheat apricot, i-banana enokubhema kanye nelayisi, okunye okufana nokolweni kanye ne-quince, i-chocolate-nut. Amanye amafemu akhiqiza amaqebelengwane ahlanganisiwe. Isibonelo, umgodla we-cereal kanye nemifino wesipinashi, ithanga, ilayisi, ama-leeks, ukolweni, noma iphalishi yezinhlamvu ezinhlanu. Izitshalo ezinjalo ngokuvamile ziningi kakhulu futhi ziwusizo kakhulu kunabanye, kodwa kufanele uqaphele ukuthi kungenzeka yini ukubhekana nokugula.
Lapho ukhetha i-porridge ingane, kufanelekile ukugxila ezintweni ezithandwa ngumntwana, amathuba ezemali, futhi-ke, izincomo zesidokotela sesazi.
Ukuqapha okukhethekile kufanele kuhokhwe kulezi zinombolo ezilandelayo:
i-naupakovke kufanele ibhalwe phansi okuqukethwe kwe-porridge ngesiRussia ukuze ukwazi ukufunda nokuthola ukuthi yiziphi izinto zokudla okunomsoco ezikhona nokuthi ngabe unjani - ngakho-ke unquma ikhwalithi yomkhiqizo.
Umkhiqizi kumele acacise izithako eziningiliziwe zokukhonza 1 noma amatafula. Lolu lwazi luwusizo kuwe, ukuze ukwazi ukunquma ukuthi lo mkhiqizo ulinganisiwe futhi ugcwele kanjani.
unake izimo zokugcina kanye nokuphila kwelanga.
Ngokwemvelo, lapho ulungiselela iphalishi landela imiyalo lapho yonke imithetho iboniswa khona. Nestoit yokwenza iphalishi "ngeso". Phatha ngokucophelela ukudla komntanakho ngokungathí sina. Abahlengikazi bayeluleka ukuthenga i-porridge ezinganeni ezitolo ezikhethekile zokudla kwezingane, i-polyclinics nama-pharmacy. Akudingeki ukuba wenze lokhu ezimakethe, ngezikhangiso noma kwezinye izindawo, izindawo ezingenhloso. Qaphela izimo ezingalungile zokugcina kanye namakhohlisi.
Isinkwa se-Butter nama omisiwe
Ngomculo wokuguqula: iqoqo le-Carnaby Street e-Jewelry kusuka kuRoberto Coin
I-Calla - isitshalo sezindlu
Izindaba ezinhle kakhulu izitsha zaseMexico
U-Anastasia Volochkova uhlelwe ngumthandi omusha
Amafutha Vishnevsky ekulweni nama-acne
Amabhola we-cheese ku-chips kakhukhunathi
Ungadla kanjani ilungelo lokulondoloza intsha?
Inkukhu isaladi ngamagilebhisi namantongomane